Ọkachamara Semalt akọwapụtara A1 Website URL Scraper
Wepu weebụsaịtị gụnyere ịchịkọta ma ọ bụ iwe ihe ọmụma weebụ na nchekwa ụgbọala nchekwa mpaghara. Enwere ike iwepu data site na saịtị ma chekwaa ya na mpaghara ebe eji A1 website wepu ihe. Ị nwere ike ikpokọta ma jikọta ihe dị iche iche nke ozi weebụ maka ịmepụta mmepụta data data. Tụkwasị na nke a, ịnwere ike nyochaa URL iji wepụ data na ịmepụta CSV yana faịlụ SQL - name for free. Ị nwere ike mbupụ ozi a na drive mpaghara ma ọ bụ chekwaa ya na nchekwa data dịka data data SQL.
Ntuziaka SEO a nwere ihe ndị dị mkpa iji jiri mkparịta ụka Web URL kpochapụ.
Iji malite, ịkwesịrị ibudata ma wụnye ngwá ọrụ A1 website URL. Software a na-agba ọsọ na Windows OS dị ka Windows 10/8/7 / Vista / XP / 2008/2003 yana Mac os usoro dịka macOS / os X - Yosemite ma ọ bụ nke ọhụrụ. Ngwaọrụ a:
Enwere faịlụ nbudata nke 6.09MB naanị.
Nchịkọta 8.x adịghị mkpa ụgwọ ọ bụla nke ndenye aha.
E nwere oge ikpe ikpe zuru oke nke ụbọchị 30 iji nyochaa arụmọrụ ya.
Ụgwọ: $ 0 maka nsụgharị n'efu na $ 49 maka ụdị ọrụ ọkachamara.
Enwere nkwado ngwaahịa n'efu ma tupu ịme nzụta..
Otu ihe dị mma na mkpokọta A1 website URL bụ na ịzụta a na-ekpuchi nsụgharị niile nke 8.x. Ọzọkwa, ndị mmadụ ga-enwe ike ịmegharị na 9.x mbipute oge ọ bụla ọ na-tọhapụrụ tupu oge 1yr oge agwụla.
Wepụ data weebụ na ebe nrụọrụ weebụ URL
Onye nchịkọta nwere ike nwee ike ịrụ ọtụtụ ọrụ bara uru na ntanetị. Ọrụ ndị a na-agụnye ikpochapụ na ịchọta data sitere na isi mmalite dị ka ebe nrụọrụ weebụ na-agagharị, hotels, stocks and quotes. Ndị mmadụ nwekwara ike ịmekota scraped na ebe nrụọrụ weebụ data maka dị iche iche data analysis algorithms na ngwaọrụ. Ndị mmadụ nwere ike ịmepụta ihe ndị echekwara site na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ ma debe ha na usoro nke kwekọrọ na nchekwa data gị.
Achị weebụ Weebụ na weebụ bụ ududo ududo weebụ. Mgbe ọ na-agbaji, ọ ga-enwe ike ịrụ ọtụtụ ọrụ dịka nzapụta URL. Ị ga - enwe ike ijikwa ọsọ nke na - agba agba ka i wee nwee ike weghara ihe niile dị mkpa ị chọrọ gụnyere ibu ọrụ weebụsaịtị.
Apu scraper na-egosipụta ọtụtụ okwu mgbe niile nke nwere ike daba na ụdị data ịchọrọ. E nwekwara ngwaọrụ ndị nwere ọrụ enyi na-enyere aka n'ịchọta ụzọ e si achịkwa data ahụ. Ị nwere ike ịmepụta okwu ọ bụla dị mkpa maka ozi ịchọrọ.
N'ikpeazụ, ihe nchọgharị weebụ A1 nwere ike ịnwe ike ibudata ozi weebụsaịtị na usoro ị chọrọ. E nwere ọtụtụ usoro site na nke ị ga-enwe ike ịbupụ data sitere na nchịkọta URL. Kasị, ị nwere ike ịnweta ụdị data dị ka CSV ma ọ bụ ọbụna faịlụ SQL. Nhazi nkwado na-ekwe omume. Ị nwere ike ịmepụta usoro nhazi maka nchịkọta data gị. Site na ikpe ikpe n'efu ụbọchị 30, ị nwere ike ịdị njikere ịmepụta nchịkọta data na weebụsaịtị dịka ebe nrụọrụ weebụ.